ကျောက်ခဲညီငယ် ဖြစ်သူ အောင်သာငယ် က အကိုကြီး ဖြစ်သူ ကျွန်တော် ကို သီတင်းကျွတ်ကန်တော့တဲ့ အနေနဲ့ မေးခွန်း (၂၀ ) ကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီး tag လိုက်ပါသတဲ့... ကျွန်တော် ကလည်း ခေသူ မှမဟုတ်တာ ဗမာပြည်မှာ ကထဲက တက်ကျမ်းတွေ ထုံး လိုခြေ ရေ လိုနှောက် ဖတ်ခဲ့ပြီးသား.. ဆရာကြီး သိန်းဖေမြင့် ရဲ့ တက်ဘုန်းကြီးတို့ တက်ခေတ် နတ်ဆိုး တို့ ဆို တက်ခေတ် အစမ်းစာ ဆိုပြီး ဖတ်လာခဲ့တာ....
ဟော..ပွဲဦးထွက် မေးခွန်းက...what is your name တဲ့ အင်္ဂံလိပ်စာ စသင်စ ၅ တန်း ကျောင်းသား ဘ၀ သတိရ လိုက်တာနော်...... ဖြေပါပြီ... Nai..... ကျွန်တော် နာမည်ကို အရင်က ဗမာတွေ ပေါင်းသလို ... Naing... ဆိုပြီး ပေါင်းလာခဲ့တာ... စင်္ကာံပူလည်း ရောက်ရော... စလုံး တရုတ်တွေက ကျွန်တော့ နာမည်ကို ဖျက်ကြပါလေရောလား...... Nai ကတလုံး... Ng ..က တလုံး နှစ်သံခွဲပြီး .. နိုင်အင်း တဲ့.... အမလေး... မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး... အင်းတို့.. ဟိုတယ်တို့.. ဆိုတာ.. ဗမာပြည်မှာ ကြက်တွေ ပျော်မွေ့ရာ နေရာ... တော်ကြာ.. တကယ် ကိုယ့်ဆီ လာပျော်မွေ့ နေမှဖြင့်... ဆိုပြီး.. passport အသစ် လဲတော့.. စာလုံးပေါင်း ပြောင်းလိုက်ရတယ်... အခု..U S citizen လျှောက်တော့ ခပ်တည်တည် ဘိုနာမည်ကလဲ ထည့်ထားသေးတယ်.....
A four letter word ..တဲ့.. Nerd.. ပေါ့လေ.. တကယ်ပဲ စိတ်ဝင်စား နေသလိုလို... ဗမာပြည်မှာတုန်းက ... ကွန်ပြူတာ ဆိုတာ TV နဲ့ လက်နှိပ်စက် ပေါင်းထားတယ် ထင်တာ......
A boy's name.. Nicholas.. အဟီး.. ဒါလဲ.. ကိုယ့်နာမည်ပဲ..
A girl's name... လွယ်လွယ်ကူကူ... Nancy.. ပေါ့..
An occupation.. News-dealer ပေါ့.... ၀ယ်သူ မလာရင် စာပဲ ထိုင်ဖတ်နေမယ်၊
A color.... Navy blue ပေါ့ .. ဘာခက်တာလိုက်လို့...
something you'll wear.... အဟီး... အကုန်အကျ သက်သာအောင် ..Nude....... Miami south beach က nude beach မှာပဲ ၀တ်မှာပါ... လေလေး တဖြူးဖြူးနဲ့.. အေးစက်စက်လေးပေါ့... ဟဲ. ဟဲ.....
A food... Nigiri.. Tuna, salmon, yellowtail အကုန်ကြိုက်...
Something found in the bathroom..... Nivea...ပဲ သုံးတယ်၊
A place..... Niagara Falls... ပျော်စရာ သိတ်ကောင်းတာပဲ...
A reason for being late.... Network break down in the subway ပေါ့ နယူးယောက် က ရထားတွေက နှစ်တရာ ကျော်ပြီဆိုတော့ ခနခန ဖြစ်တယ်....
Something you'd shout....... Never ! Never ! Never... အော် ခိုင်းလို့သာ အော်လိုက်ရတယ်... ဘာမှန်းလဲ သိပါဘူး..... တတ်နိုင်ပါဘူးလေ ကလေးတွေနဲ့ ပေါင်းတော့လည်း ခိုင်းတာ လုပ်ရမှာပေါ့.......
A movie title... ကိုယ်က James Bond ဇတ်ကားတွေမှ ကြိုက်တာ ဆိုတော့ N နဲ့ စတဲ့ Never say never again ပေါ့... ဂျိမ်းစဘွန်း ကားတွေ ကတော့ ထိုးစရာရှိ ထိုး ကြိတ်စရာ ကြိတ် ဖက်စရာရှိ မင်းသမီးကို အားမနာတမ်း ဖက်.. ဒါမျိုးမှ ကြိုက်တာ.. ကုလား ဇာတ်ကားများ တော့ မကြိုက်ပေါင်.. မင်းသမီး လက်ကိုင်ဖို့ အရေး ... အို.... တောင်ပေါ် ပြေးတက်လိုက်... သစ်ပင် ပတ်ပြေး သီချင်းဆိုလိုက်.. ရေထဲဆင်းလိုက်.. နဲ့ ချာချာကို လည်လို့...
Something you drink...... Natural Beverages ပေါ့... အဲဒါတွေ သောက်ပြီး ခါး လက်မ ၃၀ ကို ထိမ်းသိမ်းလာတာ အနှစ် ၃၀ ရှိပေါ့.......
A musical group ..တဲ့ဗျာ... ကဲ ..ခက်ကြပေါ့... ကိုယ်ကြိုက်တာက.. ရွာက ဆွမ်းတော်ကြီးခံတဲ့ ဗျော .. ဘယ်လိုလုပ် N က ပါမှာတုန်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘ၀ ဘိုသီချင်းတွေ.. ဟဲ ကြတော့.. အဲဒီတုန်းက ခေတ်စားနေတဲ့ Aerosmith တို့ ABBA တို့..... အို.... လူကြံရင်... ထရံတောင် ဘာဖြစ်ဆိုလား ဖြစ်သေးတာ.. ကိုင်း.. google ထဲ ရှာလိုက်မယ်.... No Shame ..ဗျာ..... သိတယ်မို့လား.. ကိုယ်ကလဲ သိတ်မရှက်တတ် တော့ဘူး.....
.An animal .. တဲ့.... N ..နဲ့ စတဲ့ တိရစ္ဆာန်က တော်တော် ရှားပါးပါဘိ..... သြော်... ဒို့ဟာ တိရစ္ဆာန်မျိုး မဟုတ်ပါလား... ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားချင် သလိုလို ဘာလိုလိုတောင် ဖြစ်မိသေး.... တွေ့ပါပြီ... ငှက်ကလေး .. Nightjar ဆိုပါလား... ညကြီးသန်းကောင်.. အသံဆိုးနဲ့ အော်တဲ့ အကောင် ဆိုတော့.. မိန်းကလေးဆောင်ရှေ့ကို .ကိုယ်လို.. သီချင်းသွားဆိုတာ.. နေမှာပေါ့လေ... မိန်းကလေးများကတော့.. အဲဒီ ကျွန်တော့အသံကို အဆောင်ထဲက နားထောင်ပြီး ကြည်နူးလို့.....အ..ဟတ်..ဟတ်..ဟတ်...
A street name... အိမ်နားက လမ်းကြားက ဆိုင်းဘုတ် ပြေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်.... ခနလေး.... Newton Ct ..တဲ့ဗျား......
A type of car...... အင်း...... ကိုယ်ကြိုက်တာက.... Mustang တို့ BMW တို့... လောလောဆယ် စီးနေတာက... Corolla.... N ..နဲ့ စပါဆိုတော့လည်း.... Nissan GT-R Premium... ပေါ့ .. ဒေါ်လာ ၈၃,၀၄၀ တန်လေ... ရေးမယ့် ရေးတော့ ခပ်တည်တည် ဈေးကြီးတာ ရေးထားမယ်... ဝယ်တော့ မစီးနိုင်သေးပါဘူး...
A title of song...... No Surrender... နဲနဲတော့ ခေါင်းမာတယ်.....
A verb......nap....ကဲ ..ကဲ.. တက်စာတွေ စား... တက်မှတ်တမ်းတွေ.. ရေးပြီး.. တရေးတမော.. တက် အိပ်လိုက်ဦးမယ်.......
Posted by ရွှေရတုမှတ်တမ်း at 8:00 PM